पार्टी त सप्पै निस्तै भो ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, असोज ४, २०७७ मा प्रकाशित
आजदेखि पानी पर्न रोकिन्छ कि भनेको थियो किन रोकिन्थ्यो । अपीको खोंचतिर अझै कालो वादल मडारिंदै छ । यो मौसम पनि नेकपाको विवाद जस्तै भयो । कस्तो कचल्टिएको !
ए झुम्री ! लु चाय बना हौ तातो पानी खाउँ ! होइन भने त जाडोले कम्प छुटाउने भयो ।
अरुले मुलुक खाए तिमी चै जैले चिया खादै भेडी गोठमै सिद्धिने भयौ बुढा !
यस्तै भयो ! जे हुनुपर्ने त्यो हुँदै भएन । जे नहुनु पर्ने त्यो सप्पै भयो । अब आज पनि भिरघरेसंग गफ्फा गरेर बस्ने हो । त्यसलाई फुन गर–गर झुम्री !
लु…! फुन लागेको छ । आफैं बोल ।
ए भिरघरे ! आइजो हौ गफा गर्न । ए आउँदै पो छस् । लल, गज्जव !
हौ काका ! कता बसेका छौ !
यहाँ छु ! यता आइजो ।
कहाँ जौं, कहाँ जौं भर ! अनि पार्टी बेग्लै भए पनि राजनीति कुरो त काका काकीले नै बुझ्छन् भनेर आको नि काका !
राजनीति कुरो पनि के गर्नु हौ भतिज ! विरक्त लागेर आउँछ । हाम्रो त पार्टी लगेर ओलीलाई बुझाइ दिई हाले । पहिला ओलीलाई सत्तोसराप गरियो । अहिले नेता मान्नु परेको छ ।
ओलीले पार्टी बचाई दिएको छ भनन् । के जिब्रो चपार बोल्छौ काका ! हाम्रो काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता सोत्तर पारेर मार्ने तिमारु । अहिले तिमार्लाई बचाउनु परेको छ ।
नचाहिने कुरो नगर भिरघरे ! हामीले गर्दा नै देशमा गणतन्त्र आयो । संघीयता र धर्म निरपेक्षता लागु गर्न पाइयो । जनताका छोरा शासक बन्न पाए ।
बैंक लुट्ने, काङ्ग्रेस र एमाले मार्ने, मन्दिर भत्काउने चर्च जोगाउने, पण्डित मार्ने पास्चर जोगाउने, राम्रो जग्गा र घर कब्जा गर्ने, सर्वसाधारण थर्काउने कुम मर्काउने तिमारु नै होइन काका ! अहिले संघीयता र धर्म निरपेक्षता घाँडो भा’छ ।
यस्तो कुरो गर्दा चैं मेरो कन्सरी तातेर आउँछ है ।
हेर्त भतिज ! सत्य कुरो गर्दा तेरा काकाको कन्सिरी तातेर आउँछ । अब त्यस्तो काम माओवादीले गरेकै होइन भन्दिनु पर्ने । होइन गर्न पनि अत्याचारै गरेका थिए । मेरो माइती गाउँमा चन्दा नदिने जति सप्पैलाई सुराकीको आरोप लगार कसैलाई मारे कसैलाई गाउँबाट खेदे । यिनले बाहेक सप्पैले कमाए ।
बढी नबोल झुम्री ! तिमार्को पार्टीले पनि कम गरेको थिएन ।
काका ! नरिसाउन । अरु पार्टीले राम्रो गरेका थिए भनेकै हैन । तिमार्को पार्टीले चाहिँ अत्यचारै गरेको थियो भनेको मात्र हो ।
त्यसबेला हामीले साँचैको क्रान्ति होला, सामान्ती शोषण उत्पीडन समाप्त होला, राज्य सत्ता र उत्पादनका साधन स्रोत माथि समान अधिकार होला भनेर नगर्नु पर्ने सबै थोक गरियो । धर्म भनेको अफिम हो भने । पछि त भैंसी पूजा र जन्तर …। भयो छोड्दे यस्ता कुरा ! बरु काँग्रेसको के छ सुना न !
काँग्रेसको पनि उही हो काका ! चिलले भुत्ल्याएको कुखुराको चल्लो जस्तो भा छ काँग्रेस । महाधिवेशन भको तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने समिति गठन महाधिवेशन आउन तीन महिना अघि गर्दै छन् । पूर्वबाट कृष्ण प्रसाद सिटौला कोशी उर्लिए जस्तो उर्लिन खोज्छन् तर अदुवा खोला जस्तो बन्न पुग्छन् । यता मध्य भागतिर रामचन्द्र चाहिँ आदिकवि भानुभक्त जस्तो लयबद्ध बन्न खोज्छन् तर घाँसी कुवाको पिंधतिरै जाकिन्छन् ।
हेर भिरघरे ! हाम्रो कर्णाली र सुदुरपश्चिममा देउवाको विरोध गर्ने कोही छैन । अलिकति विरोधो तुफान देउवाकै जिल्ला डडेलधुराबाट उठ्न खोज्छ त्यसलाई देउवाले किचीमिची पारिहाल्छन् । हाम्रो ओलीले पनि त्यसै गर्नु पर्ने । यदि ओली जस्तै ‘पावरफुल’ अवस्थामा प्रचण्ड पुग्ने हो भने अनि हुने थियो पूर्व एमालेको दुर्गति ।
यो झुम्रीलाई त प्रचन्नलाई गाली गर्न पाए पुग्छ । पार्टी एकता भै सक्यो अब पनि पूर्व एमालेहरु हाम्रो खेदो गर्दै छन् ।
खेदो मात्रै होइन काका ! खुकुरीले विर्सेर के गर्छौ अचानोले विर्सिदैन । पार्टी एकताको पनि कुरै मात्र हो । पूर्व एमाले पूर्व माओवादी भनेर भागवण्डा अरु २० वर्षसम्म होला जस्तो छ । पार्टी एक भयो भनेर कराउँदैमा हुने हो र ! यही पारा हो भने अर्को पटक पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन्छन् ।
ठीक भनिस् भिरघरे् !
केको ठीक भन्नु नि ! माओवादीप्रति मनभरी नकारात्मक सोच पालेर रुखो बोल्नेहरु सबै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता विरोधी हुन्। आफू केही गर्न सक्ने होइनन् । अनि बाघको छालामा स्यालको …।
लु काका त्यस्तो कुरो चैं नगर ! यदि हाम्रो काँग्रेसले र एमालेले जंगलबाट नल्याएको भए अहिले माओवादीलाई वनझाक्री र यति खोजे जस्तो गरी जंगल हिमालतिर खोज्नु पथ्र्यो । धन्न किम्बदन्ती बन्नबाट जोगिएका छौ । तीन हजार युवालाई उचालेर ‘हामी ३३ हजार’ भन्ने तिमारु नै हैन ?
हो, भिरघरे हो ! अझै पनि त्यो कन्टनमेन्ट कि सेन्टनमेन्टको पैसो …!
के दाह्रा किट्छौ काका ! भविष्यमा पनि माओवादीलाई खोज्दै त्यही काण्ड ‘हल्लो काम्रेड’ भन्न आउने छ । अहिले दाह्रा किटेर केही हुदैन । तिमी अरकच्च परेर बस काका ! म लागें उभिण्डे खोलातिर ।